मूसन्ड: ईमेल मार्केटिंग र स्वचालित | Martech Zone
मउसेन्ड: ईमेल मार्केटिंग र स्वचालनहरू
आइतवार, फेब्रुअरी,, २०१ 17 सोमबार, फेब्रुअरी 18, 2019 जर्ज फकोरेलिस
मुजन्ड, सम्मानित ईमेल मार्केटिंग र स्वचालन प्लेटफर्म, सँग पुन: परिभाषित ईमेल मार्केटिंग सुविधाहरू, मूल्य निर्धारण योजनाहरू, र यसको स्थिरता, उत्कृष्टतामा समर्पण, र ग्राहक समर्थन प्रदर्शनको साथ पैसाको लागि मूल्य हो।
केवल years वर्ष भित्र, मुजन्ड उच्च प्रोफाईल एजेन्सीहरू र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको साथ विश्वव्यापी उपस्थिति स्थापित गर्न सफल भयो टेड-एक्स, र INGनाम दिन, तर केही।
मुजन्ड हुन उद्योग मा पहिलो प्लेटफर्म थियो आईएसओ-प्रमाणित र GDPR- अनुरूप, यसैले यसको अभ्यासहरू दिमागमा प्रयोगकर्ता अभिमुखीकरणको साथ डिजाइन गरिएको हो।
ईमेलको रूपमा के शुरू भयो, यसलाई आफ्नो ठाउँ दिए ईमेल मार्केटिंग र स्वचालित, र अब एआई।
जब पहिलो ईमेल १ 1971 .१ मा पठाइएको थियो, इतिहास बनाइएको थियो। अब, २०१ in मा, ईमेल शक्तिशालीमा परिवर्तन भएको छ मार्केटिङ रणनीति मार्केटिंग विशेषज्ञहरू र दैनिक प्रयोगकर्ताहरू द्वारा एकैसाथ काम गर्दै, उपज 400% ROI.
त्यो किनभने छ ईमेल मार्केटिंग टेक्नोलोजी विकसित भएको छ जबरजस्ती, बजारहरूलाई समस्याहरूको एक ठूलो समाधानको साथ प्रदान गर्दै।
मूलतः, ईमेल मार्केटिंग प्लेटफार्महरू यो विन्दुमा विकसित भएको छ कि तिनीहरू केवल न्यूजलेटर उपकरणहरू होइनन् बरु, बजारहरू र उनीहरूका दर्शकहरू बीचको सञ्चारको एक माध्यम हो।
मुजन्ड एक किफायती छ ईमेल मार्केटिंग सफ्टवेयर यसले बजारको आवश्यकताहरूको विस्तृत श्रृंखलालाई कभर गर्न सक्दछ र यो ठूला कम्पनीहरूका लागि उपयुक्त हुन्छ धेरै माग भएका वा सख्त बजेट भएको सानाका साथ।
वर्षौंदेखि, मुजन्ड उनीहरूको समानुभूति-केन्द्रित मोडेल र असाधारण समर्थन सेवाको कारणले उनीहरू र उनीहरूका ग्राहकहरू बीच विश्वासको तह बनाएकोले ठूलो बृद्धि भएको छ।
उनीहरूको उत्पादन र बजारको कडा र कमजोर पोइन्टहरू पत्ता लगाउन व्यवस्थित छन् र पूर्ण समाधान प्रस्ताव गर्न सही समायोजनहरू गरे।
यो तुरून्त समर्पित सफ्टवेयर समीक्षा वेबसाइटहरूमा पुष्टि गर्न सकिन्छ, जस्तै क्याप्टर्रा र G2 क्रोडजहाँ मुजेन्डलाई विश्वव्यापी रूपमा शीर्ष मार्केटि Software सफ्टवेयरहरूमा स्थान दिइन्छ।
ईमेल मार्केटिंगका लागि मुजण्ड समाधानहरू
मुउजेन्डको ईमेल मार्केटिंग सफ्टवेयर क्लाउड-आधारित हो र मार्केटर्सलाई उनीहरूको श्रोताको साथ गहिराइ र निरन्तर सम्पर्क प्रदान गर्ने उद्देश्य राख्दछ। यो संग एक पूर्ण सेवा हो सरल र सहज ईन्टरफेस त्यो उपकरणको माध्यमबाट नेभिगेसनलाई सजिलो र प्राकृतिक बनाउँदछ।
जे होस् वास्तवमा मउजेन्डलाई अलग देखिने बनाउँछ, अटोमेसन सुविधाहरूको भोल्यूम र विविधताका साथै धेरै प्रतिस्पर्धी र लचिलो मूल्य योजनाहरू पनि हुन्।
यो उल्लेख गर्नुपर्दछ कि पूर्ण रूपमा छ १००० ग्राहकहरुका लागि निःशुल्क-सदाको लागि योजना, जुन स्वागत भन्दा बढी हो।
अवश्य पनि, मुजेन्डले बुझ्दछ कि एक विपणकले आफ्ना प्रयासहरू नाप्नको लागि कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण प्लेटफर्मले A / B विभाजन परीक्षण सुविधा प्रदान गर्दछ र यसको आफ्नै विश्लेषण रिपोर्ट जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको अभियानहरूको उपयोगी र विस्तृत अन्तरदृष्टि प्रदान गर्दछ।
A प्रयोगकर्ता-अनुकूल, ड्र्याग एण्ड ड्रप सम्पादक यो पनि समावेश छ जुन एक विशाल प्लस हो किनकि तपाईं मिनेटमा आफ्नो न्यूजलेटर सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ बाह्य सम्पादन सफ्टवेयरको साथ संघर्ष नगरीकन जुन धेरै जटिल हुन सक्छ। समावेश टेम्प्लेटहरू पनि एक राम्रो स्पर्श हो।
अन्तमा, मुजेंड एकीकृत गर्न सकिन्छ प्रसिद्ध प्लेटफार्महरू जस्तै Magento, WooCommerce, र Zapier संग, केहि प्लेटफर्ममा अझै अधिक बहुमुखी प्रतिभा जोड्छ।
ईमेल मार्केटिंगका लागि उत्तम अभ्यासहरू
कम्पनीहरूको विशाल बहुमत प्रयोग गर्दछ इमेल मार्केटिङ कम्तिमा तिनीहरूको मार्केटिंग प्रयासहरूको एक अंशले उनीहरूको प्रतिस्पर्धीहरू भन्दा उनीहरूको ठूलो फाइदा छ भनेर फेला पार्नेछ।
जहाँसम्म, यो भन्नु हुँदैन कि ईमेल मार्केटिंग सरल छ।
यो प्रमाणित छ कि त्यहाँ विभिन्न प्रविधिहरू छन् जुन अझ राम्रोसँग काम गर्दछन् र प्रत्येक मार्केटरले प्रयोग गर्नुपर्दछ जुन उसको कम्पनीको लागि उत्तम सम्भव बनाउन चाहन्छ।
सूची विभाजन ईमेल मार्केटिंगलाई यत्तिको सफल बनाउने कुरा के हो। उपभोक्ताहरू आज अप्रासंगिक वाणिज्यिक सन्देशहरूको साथ मात्र बम विस्फोट गर्न चाहँदैनन्। सबैजना सबै कुराको बारेमा सुन्न चाहँदैनन् र ग्राहकहरूको सूचीको साथ प्राप्त गर्ने उत्तम तरिका भनेको तिनीहरूलाई विभिन्न सूचीमा विभाजन गरेर हो।
नेतृत्व पालनपोषणको लागि ईमेल मार्केटिंग प्रयोग गर्दै। ईमेल मार्केटिंगको यो प्रयोग वर्षौं भैरहेको छ। त्यो अभ्यासको उद्देश्य तुरुन्तै नेतृत्व परिवर्तन गर्न होइन तर उहाँलाई शिक्षित गर्नु र भविष्यमा पछि उसलाई रूपान्तरण गर्नु हो।
को प्रयोग मार्केटिंग स्वचालन अतिरिक्त समय वा मानव संसाधनमा लगानी नगरीकन कम्पनीको सकारात्मक नतिजालाई गुणा गर्न सक्दछ। यो अभ्यास ईमेलको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन प्रयोग गर्नुपर्दछ ट्रिगर स्वत: जस्तै विशिष्ट घटना पछि कार्ट त्याग or स्वागत ईमेलहरू.
मुजेन्डले विश्वव्यापी हजारौं कम्पनीहरूको सेवा गर्दछ उद्योगहरूको एक विस्तृत विविधता को रूपमा ईमेल मार्केटिंग मार्केटिंग संचारको एक आवश्यक माध्यम हो जुन प्रत्येक सम्भव व्यवसाय द्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
मूसन्ड तिनीहरू हुन् भनेर वचन दिने सबै चीज हुन्! संचार उत्कृष्ट छ, र हाम्रो मुजान्ड खाता प्रबन्धक र प्राविधिक समर्थन टोली दुबै भन्दा माथि गएको छ र हामीलाई हाम्रो लक्ष्यहरू पूरा गर्न मद्दत गर्न, प्रत्येक पटक हामी उनीहरूलाई आवश्यक परेको छ। उत्पादन पनि वास्तवमै सहज र प्रयोग गर्न सजिलो छ। म नयाँ ईएसपी खोज्ने कुनै पनि व्यवसायमा मउजेन्डको सिफारिश गर्न सक्दिन।
CareerBuilder बाट एन्थोनी रिग्बी
डिजिटल युगमा सफ्टवेयर उत्पादनहरू कम्पनीहरूको बढी र अधिक आवश्यक हुँदै बढ्दै गयो। प्रतिस्पर्धीहरु लाई फरक गर्न, व्यवसायहरु अब आफ्नो ग्राहकहरु लाई एक राम्रो उत्पादन भन्दा बढी प्रदान गर्नु पर्छ। त्यहाँ सबैभन्दा सफल कम्पनीहरूले मान, ज्ञान, र उनीहरूको ग्राहक आधारमा विशेषज्ञता पुर्‍याउने कुरामा निर्भर गर्दछ।
उपभोक्ताहरूले विकासको प्राकृतिक मार्ग अनुसरण गरेका छन् र उनीहरू सादा शब्दहरूमा विश्वास गर्दैनन्। बरु, उनीहरू खोजी गर्दैछन् मानहरू जुन उत्पादको गुणवत्ता र मूल्य निर्धारणबाट विस्तार हुन्छ (भन्नु हुँदैन कि यी कुराहरुले कुनै फरक पार्दैन)।
मुजन्ड त्यो जान्दछ र किन त्यसैले तिनीहरू आफ्नो समुदायमा उनीहरूको योगदानमा धेरै फोकस गर्छन् सधैं उपलब्ध ग्राहक समर्थन, तिनीहरूको विस्तृत सामग्री पुस्तकालय मार्केटिंग शीर्षक र उनीहरूको उपयोगी अझै नि: शुल्क उपकरणहरूमा जस्तै नि: शुल्क विषय रेखा परीक्षक.
टैग: मार्केटिंग स्वचालन
जर्ज एक हो विकास मार्केटिंग सहयोगी को लागी काम गर्दै ईमेल स्वचालन सफ्टवेयर मउजेन्ड! उनी डिजिटल इरामा मार्केटिंगका बारे लेख्न मन पराउँछन् र वृद्धि ह्याक्स जुन उसले आफ्नो दैनिक अन्वेषणहरूमा पत्ता लगाइरहेको छ। उहाँ जहिले पनि अनुभवहरू र विचारहरूको बारेमा कुरा गर्न रुचि राख्नुहुन्छ त्यसैले तपाईंको रोचक ज्ञान साझा गर्न उहाँलाई सन्देश छोड्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्।
ईमेल मार्केटिंगका लागि पत्राचार सूची निर्माण गर्दै
OSX मा होस्टहरू प्रयोग गर्दै स्थानीय रूपमा DNS प्रमाणित गर्न आवश्यक छ?